ကိုသန်းလွင် ● ဆာလောင်ခြင်း – MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုသန်းလွင် ● ဆာလောင်ခြင်း
January 28, 2019 Aung Htet
(မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၉
ကျွန်တော်တို့သည် အစားအသောက်ခြိုးခြံချွေတာရာမှရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း သိကြပါသည်။ အစာ ကြောင့် ကုန်ရမည့်ပိုက်ဆံကို ချွေတာနိုင်သည့်နည်းတူ ပို၍သေးငယ်သော ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ပို၍ကြည်လင်သောခေါင်း ကိုရရှိမည်၊ အစားကိုလျော့စားခြင်းဖြင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ရန် နည်းလမ်းလျှော့နည်းမည်၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်ရန် လမ်းမရှိ၊ ဆီးချိုရောဂါလည်းကင်း ဝေးသည့်အပြင် ပိုမိုကျန်းမာသောဘ၀နှင့် အသက်ကိုရှည် ရှည်နေရမည် စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း ဆာလောင်ခြင်းကိုတော့ သည်းခံရမည်။ ဆာလောင်သောကြောင့် စိတ်တိုလိမ့်မည်။ မောပန်း နွမ်းနယ် စေမည်။ မကောင်းသူဖြစ်လိမ့်မည်။ အစာလျော့စားနည်းများရှိကြရာ ၅ : ၂ ခေါ် ၅ ရက်က သဘာဝအတိုင်းစားမည်၊ ၂ ရက် က မစားဘဲနေမည်။ ၁၆:၈ ခေါ် ၈ နာရီအတွင်းစားမည်၊ ၁၆ နာရီ အဆာခံမည်၊ နည်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်။ ကြည့်ရသည်မှာ လူတို့သည် အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြည့်ပြီးကြပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့သည် အစာမှရသော ကယ်လိုရီကိုချိုးနှိမ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကို သိကြသည် မှာ လည်းကြာပါပြီ၊ ဆဲလ်တစ်ခုသာပါသော ရိစ် (Yeast) များမှ ကြွက်များအထိ စမ်းသပ်ချက်များအရ ကယ်လိုရီကို ၄၀ % လျှော့၍စားခြင်းဖြင့် အသက်ကိုပို၍ရှည်စေကြောင်းသိရပါသည်။
အစာမစားဘဲနေခြင်းမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်တစ်ခုအဖြစ် နှစ်ပေါင်းရာချီ၍ နေခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ သို့သော် ၎င်းကို စားသုံးသူတို့လက်ဝယ်သို့ရောက်အောင် ဖြန့်ချိသည်မှာ ငါးနှစ်သာသာဘဲ ရှိပါသေးသည်။ တိရစ္ဆာန် များကိုလေ့လာရာမှလည်း အစားအစာမစားဘဲရှောင်ရှားခြင်းသည် များစွာသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျေးဇူးများရှိကြောင်း သိလာကြပါသည်။ အစာ မစားဘဲနေခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပြီး ခွန်အားကိုထိမ်းသိမ်းပါလိမ့်မည်။ ဗိုက်ထဲတွင်ချေ ဖျက်စရာ အစာမရှိသောကြောင့် စိတ်သည် ပို၍ကြည်လင်လာမည်။ စိတ်ကြည်လင်ခြင်းဖြင့် အစာရှာရာတွင် ပို၍အာရုံစူးစိုက် မှုများဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ကျောက်ခေတ်ကလူတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း အစာကိုရှာဖွေမရပါက မရသည့်အတိုင်းဖြစ်အောင် နေရ သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် တစ်ရက်လျင် သုံးကြိမ်စားရသောအကျင့်သည်လည်း ယဉ်ကျေးသောလူတို့ခေတ် ရောက်မှစားနိုင်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အစာကိုမစားဘဲအငတ်ခံခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာ၏အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေပါလိမ့်မည်။ ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုနှင့် ပါကင်ဆန် (Parkinson)၊ အယ်ဇိုင်းမား (Alzheimer) တို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဆာလောင်ခြင်းမဖြစ်စေဘဲ အစာကိုချွေတာစားကြမည်၊ အစားအစာကိုချွေတာခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်နေသောကုမ္ပဏီများရှိသည်။ ဥပမာ “Prolon” ဆိုပါစို့၊ ဤကုမ္ပဏီ၏အစားအစာများကို ကြည့်လိုက်ပါ၊ ဟင်းချို (Soup) ကျိုသောက်စရာ အထုပ်က ၂ ထုပ်၊ ဘီစကစ်အနည်းငယ်၊ မြေပဲယိုအနည်းငယ်ပါဝင်ပြီး ကျွန်တော်တို့အဖို့ကတော့ ဤအထုပ်ကို စားလျင်လည်း မကြာခင် ဆာလာတော့မှာ သေချာပါသည်။
အချို့ကလည်း တစ်လတစ်ခါ အစာမစားဘဲနေလျှင် လုံလောက်ပြီဟုယူဆကြသည်။ ဤသို့ ရှောင်ခြင်ဖြင့် အိုမင်းခြင်း (Ageing) ကိုလည်း အရှိန်လျော့နည်းစေမည်။ သင်၏ အစားအသောက်ကို မည်သို့ပင်ရှောင်ကျဉ်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းကို မည်မျှပင်လုပ်ပါစေ အိုမင်းခြင်းကိုတော့ ရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မည်ဟုမထင်၊ သင်သည် အမြဲအိုမင်းနေမည့်အပြင် ဆဲလ်ပျက် စီးခြင်းမှာလဲ အမြဲရှိနေမည်သာ၊ တစ တစ ပိုမိုများပြားလာဖို့သာရှိသည်။
တိရစ္ဆာန်များနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းမှသိရသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာသည် အစာရေစာရှားပါးပြတ်လတ်ခြင်းကြောင့် ဆဲလ်ပျက်စီးမည်၊ အလုပ်မလုပ်တော့သော ဆဲလ်များကိုစုစည်း၍လောင်စာအဖြစ်သုံးစွဲကာကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက် ရေးကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်၏ ဤဖြစ်ရပ်ကို (Autophagy) ဟုခေါ်သည်။ အစာရေစာ ပြတ်လတ် ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ခုခံတတ်သောသတ္တိက ဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အော်တိုဖဂီဖြစ်စဉ်မှာ လူတိုင်းတွင်ဖြစ်ခါ အသက်ကြီးရင့်လာသည် နှင့်အမျှ သတ္တိလျော့နည်း၍လာမည်။ ထိုအခါ ဆဲလ်များအတွင်း အပျက်အစီးများနှင့် ပြည့်နှက်နေပြီး အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင် သောရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါများဖြစ်လာနိုင်သည်။
အချို့ပညာရှင်များက ယုံကြည်သည်မှာကင်ဆာနှင့်ဆီးချို (Type II) တို့ဖြစ်ရသည်မှာကိုယ်ခန္ဓာက ဆာလောင် သည်ဟု မရှိဘဲ အမြဲအစာဖြင့်ပြည့်နေသောကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုကြသည်။ လူ ၁၀၀ ကျော်ကို စမ်းသပ်ကြည့် ရာ အစာခံခြင်းဖြင့်အလေးချိန်လျော့ခြင်း၊ အဆီလျော့ကျလာခြင်း၊ သွေးခုံနှုန်းလျော့ကျခြင်းအပြင် အင်ဆူလင် အမှီပြုနေသောဟိုမုန်းဓါတ် (IGF-I Insulin Link Growth Factor) ကျဆင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုဟိုမုန်း ဓါတ်မှာအသက်အရွယ် အိုမင်းခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။ အစာကိုလျှော့စားခြင်းဖြင့် သွေးထဲတွင် ကော်လက်စထရော (Cholesterol) ပါဝင် နှုန်းလည်း လျော့ကျသွားသည်။
ဤနေရာတွင်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာ အစာရေစာပြတ်လတ်ခြင်းသည် အဘယ်မျှလောက်ရှည်ကြာလျှင် ကျန်းမာရေး အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်းဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ သည်မေးခွန်းအတွက် အဖြေမရှိသေးပါ၊ ယခုအချိန်အထိ အစာကိုမစာဘဲနေခြင်း (Fasting) နှင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း (Starving) တို့အကြား မည်မျှကြာမည်ဆိုသည်ကို မသိရှိ ဘဲဖြစ်နေသည်။ တစ်ခုသေချာသည်မှာ လူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေပေသေးရာ တယောက်နှင့်တယောက် လည်း ကွဲပြားနေမည်ဖြစ်သည်။
အစာငတ်ခြင်း၏အခြားအကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ခုမှာ အသဲနှင့် ဆိုင်ပါသည်။ သွေးထဲနှင့်အသဲတွင် ဂလူးကို့စ်မရှိတော့ သောအခါအသဲသည် အဆီများကိုကီတုန်း (Ketone) အဖြစ်ပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းမှာ ကြွက်သားများနှင့် ဦးနှောက်ကို အလုပ်နိုင်စေရန် အင်အားကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကို (Ketosis) ဟုခေါ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် ၂.၅ % မှ ၈ % အထိကျသောအခါ ကီတိုးဆစ်စတင်၍ဖြစ်ပါသည်။ ဤဖြစ်ရပ် စတင်အောင် မည်မျှအချိန်ယူရသည်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့မသိကြသေးပါ၊ Logon ကုမ္ပဏီ ကမူ အနည်းဆုံး ၃ ရက်မျှ အချိန်ယူရမည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ၅:၂ တွင် နှစ်ရက်သာ အစာမစားဘဲနေခြင်းဖြစ်၍ ဤဖြစ်ရပ်ကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်။
လူတို့တွင် အသဲကသိမ်းဆည်းထားနိုင်သော ဂလိုင်ကိုဂျင် (Glycogen) မှာ ၇၀၀ ကယ်လိုရီနှင့်ညီမျှသည်။ လူ တစ်ယောက် ၏အိမ်တွင်နေရင်း အသုံးပြုသောကယ်လိုရီမှာ ၁ နာရီလျှင် ၇၀ မျှရှိရာ ထို့ကြောင့် အသဲတွင် သိုမှီး ထားသော ဂလိုင်ကိုဂျင် အားလုံးအသုံးပြုဘို့ဆိုလျှင် ၁၀ နာရီမျှကြာသည်။ ကြားထဲတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါက ၁၀ နာရီထက်လျော့နည်းသွားမည်၊ အပြင်းအထန် ပြေးလွှားနေသောလူတယောက်သည် ၁၀ မိနစ်တွင် ကီလိုရီ ၁၀၀ ကိုသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်တခုမှာ လူ၏အာရုံခံအင်္ဂါများ၏ အာရုံခံနိုင်မှုအင်အားသည် စားထားသောအစာနှင့်သက်ဆိုင်နေသည်။ အစာအိမ်ထဲ တွင် အစာအနည်းငယ်သာရှိပါက ပိုမို၍ကြည်ကြည်လင်လင်တွေးခေါ်နိုင်ပြီး စဉ်းစားနိုင်စွမ်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကိုယခုခေတ် အမဲလိုက်သူများမှာတွေ့ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များက ပါပူဂါနယူးဂီနီကျွန်းတွင် အမဲ လိုက်သူများရှိရာ သူတို့သည်သားကောင်ရှာဖွေရန် တောထွက်ကြရာ တွင် နံနက်စာကို မစားဘဲသွားတတ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ သားကောင်ကို ဆာဆာလောင်လောင်နှင့်ရှာဖွေမှ ကိုယ်ခန္ဓာသည်ပေါ့ပါးနေပြီး ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ပိုမို၍ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်သိနိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ယခုအချိန်အထိ ဤအဆိုကိုဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် သုတေသနမပြုလုပ်ကြရသေးပါ၊ ကြွက်များတွင်မူ ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ကီတိုး ဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုသည်နှင့် ဦးနှောက်သို့ ဓါတုဗေဒဓါတ်တမျိုး ထုတ်လွှတ်လိုက်သည်။ ထိုဓါတုဓါတ်ကို (BDNF) ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းဦးနှောက်တွင်းသို့ရောက်သွားသည်နှင့် နျူရုန်းများ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ဟု အဆိုရှိ သည်။ ထို့ပြင် နျူရုန်းကို (Mitochondria) ဓါတ် ပိုမိုထုတ် လွှတ်ပေးသည်။ ဤဓါတ်သည် ဦးနှောက်ကို ခွန်အားဖြစ်စေသည်။ ဤနည်းဖြင့် ဦးနှောက်၏ စွမ်းရည်မြင့်တက်လာရပါသည်။
အစာငတ်ခံခြင်းဖြင့် လူတို့၏သက်တမ်းကိုဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုတော့ သေချာသုတေသန မလုပ်ကြရ သေးပါ။ ဥရောပကောင်စီ( European Society For Endocrinology) ကမူ မကြာမကြာအစာပြတ်လတ်ခြင်းသည် ပန်က ရိယပ် (Pancreas) ကိုထိခိုက်စေသည်ဟု သတိပေးထားပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ရောဂါများဖြစ်နိုင်သည်? အင်ဆူလင်ကို မှန်မှန်ထိုးပေးနေရသူများအဖို့မူ အစာရှောင်ခြင်းနှင့် ဝေးဝေးနေသင့်သည်။
ဗုဒ္ဓကသူ၏ရဟန်းတော်များကို နေ့လွဲညစာမစားရဟုတားမြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၀မ်းထဲတွင်ချေစရာ အစာမရှိပါက ခေါင်းသည် ကြည်လင်လာပြီး ပိုမို၍အာရုံစိုက်နိုင်ကြပါသည်။ တရားအလုပ်ကို ပိုလုပ်နိုင်ကြပါသည်။ “၀မ်းတလုံးကောင်းက ခေါင်းမခဲဖူး” ဟူသော စကားလည်းရှိပါသည်။ စားစရာကိုအသိဉာဏ်သုံး၍ စားသင့်ပါသည်။
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မဟာသီယာ မူဟာမက်ကို အသက် ၉၃ နှစ်အထိရှည်အောင် ဘယ်လိုနေခဲ့ပါသလဲဟုမေး သောအခါ “သူဟာ ဘယ်တော့မှ အစာကိုပိုမစားဘူး” ဟု ဖြေခဲ့ပါသည်။ အစာကို ချိုးခြံခြင်းကြောင့် ရနိုင်သည့်အကျိုး ကျေး ဇူးများမှာ များပြားလှပါသည်။
Ref: Fasing Power: Can going without food, really make you healthier. By Caroline William
New scientist 20 October 2018
← အောင်ငြိမ်းချမ်း ● တိုက်ပွဲကြားမှ မြေစာပင်များ အကူအညီလိုအပ်နေ
ဇင်လင်း ● ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးလမ်းပေါ်ရှိ တစ်ဆို့မှုများ ဖယ်ရှားရေး →
April 22, 2012 April 22, 2012 Aung Htet
မောင်ရစ် ● ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ နဲ့ မောင်တို့တတွေ
July 1, 2016 July 4, 2016 Aung Htet
U Win Tin ရသဆောင်းပါးစုံ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဦးဝင်းတင်
ဇာဝါရီ – ငြိမ်းချမ်းဘုံနန်းမှာ ပြန်ဆုံကြတဲ့ မဟာလူသားနှစ်ဦး